Itoophiyaan taarifa tajaajila humna elektriikaa dabaluuf jirti - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaan taarifa tajaajila humna elektriikaa dabaluuf jirti
Gatii tajaajila ibsaa elektirikii dabaluuf adeemsi barbaachisu jalqabamuu Abbaan taayitaa Inarjii Itoophiyaa beeksise.
Gatiin dabalamuu kuni fayyadamtoota humna ibsaa xiqqaa fayyadamani akka hin miine beeksiseera.
Akka daayireektarri Abbaa taayitichaa Obbo Getaahun Mogas himanitti yeroo dhumaatiif daballiin taarifaa kan taasifame waggaa 12 dura.
''Waggaatti harka 10-15 qaalayiinsi qaqqabe akka turee fi sharafa biyya alaarrattis adda addummaan guddaan jira,'' jechuun sababa dabalamuuf dubbatu.
''Waajjirichi meeshaalee kaappitaalaa hanga harka 60 ta'an sharafa biyya alaan bitee galcha. Gatiin meeshaalee hedduu dhaabbatichi itti fayyadamu waan hedduu dabaleef fooyya'insi taarifaa dirqama tahe.''
Kun daballii osoo hin taane sirreefama kan jedhan Daayireektarichi, ''dhaabbanni keenya maamiltootarraa galii barbaachisu sassaabuu dadhabuun, rakkinni qulqullina tajaajila kenninuurra gahe komiif nu saaxileera'' jedhan.
Humna ibsaa sa'aatii 24 hin barbaannu
Biyyoota Afrikaa biroo walbira qabuun yoo himan taarifni elektirikii Itoophiyaa xiqqoo ta'uu kan himan obbo Geetaahun, ''biyyoota biroo keessatti, waggaa sadiif fi afuritti fooya'iinsi ni taasifama'' jedhaniiru.
Taarifni Eleektirikaa biyyoolessaa hojiirra ooluusaan dura, qaamolee dhimmichi isaan ilaallatu waliin mariin erga godhamee booda, qaamni mootummaa dhimma kanarratti murtee kenna jedhaniiru.
Taarifni haaraan yoom hojiirra akka oolu garuu ammaaf hin beekamne. Yeroo gabaabaa keessatti akka hojjetamu gama Abbaa Taayitaa Inaarjiin fedhi jiraachuun ibsameera.
Hojjettoota Abbaa taayitichaa miiliyoona walakkaa ta'an irratti fooyya'iinsi taarifaa kun hojiirra akka hin oollee fi sababni ammoo galii gad aanaa argachuu akka ta'e ibsaniiru.